Chirp oo loogu talagalay Apple Watch, oo ah barnaamij dib ugu soo celiya Twitter-ka taleefanka casriga ah ee Apple | Wararka IPhone
Chirp oo loogu talagalay Apple Watch, oo ah barnaamij ku soo celiya Twitter-ka Apple's smartwatch
Twitter-ka ayaa laga waayey Apple Watch dhawr bilood ka hor. Kadib cusbooneysiin ku saabsan nooca iPhone-ka, isticmaaleyaashu waxay arkeen codsigii saacadda smart la waayey. Mid ka mid ah sababaha ayaa ahaa in aanu ahayn barnaamij asal ah oo marka loo eego dalabaadka Apple laftiisa, iyada oo WatchKit 2, ujeedadu ahayd: dhan app waayo saacaddu waa inay ka madax bannaan tahay iPhone-ka. Si kastaba ha noqotee, horumariyeyaasha qaarkood ayaan is casilin si ay u oggolaadaan Twitter inay ka baxaan curcurahooda, waana taas sida saxda ah horumariye Will Bishop wuxuu ku sameeyay "Chirp for Twitter".
Runtu waxay tahay, ama ha jeclaato ama ha ahaato, Apple Watch wuxuu diiradda saarayaa qayb xoogaa ka duwan tan ogeysiisyada. Saacaddaan casriga ah waxay sii kordheysaa "khabiir" si ay u ilaaliso xakamaynta dhammaystiran ee laxanka nolosheena waxayna na siineysaa wicitaanno toos ah markii loo baahdo. Sidoo kale, Cilmi baarista 2.0, kaas oo la imaan doona iOS 12, waxay keeneysaa horumarin ka dhigi doonta aaladaha Apple xitaa kuwa xiisaha leh qaybta caafimaadka.
Sidoo kale waa run in isticmaalka qaar ka mid ah codsiyada ka curcurka laga yaabaa in aan macno badan. Sababtoo ah dhaqdhaqaaqa curcurka, laakiin sababtoo ah cabirka shaashadda Apple Watch iyo awoodda aad ugu raaxeysan karto fadhiyada qaarkood. Waa run in dulmarrada qaarkood aysan xumaan - markale iOS 12 waxaan heleynaa ikhtiyaarkaas - laakiin inaan sii wadno kulan buuxa oo Twitter ah ama wixii la mid ah ...
Taasi waxay tiri, horumariyaha ayaa sharxaya taas Chirp waa codsi hooyo u ah Apple Watch kaas oo aan ku eegi karno «Waqtigayaga», iyo sidoo kale calaamadeynno kuwa ugu cadcad ama dib ugu soo qorno wax kasta oo aan u maleyno inay ku habboon yihiin. Waxaan sidoo kale ka jawaabi karnaa ama ka diri karnaa farriimaha tweets-ka Apple smart watch. Hadda, waxay umuuqataa in mustaqbalka fariimaha tooska ah sidoo kale lagu dhex biirin doono app.
Chirp waa bilaash wax ku iibsiga gudaha pp. Maaddaama horumariyaha laftiisu sharraxayo Reddit, qaabka lacag-bixinta ayaa la mid ah wixii ku dhacay codsigiisii ​​kale ee App Store, Nano for Reddit. Taasi waa, isticmaalaha wuxuu bixiyay qadar - inta udhaxeysa $ 2 iyo $ 4 - si uu u helo cusbooneysiinta PRO mustaqbalka. Si aad u noqoto mid sax ah, waxaannu kaaga tagaynaa sharraxaadda toosan ee Bishop: “Chirp ee Twitter waa bilaash, iyada oo ikhtiyaar u leh in lagu casriyeeyo Chirp Pro iyada oo hal-mar la bixinayo wax kasta oo aad rabto markaad iibsanayso barnaamijyada. Qaarkiin waad ogtahay barnaamijkeyga kale, Nano ee Reddit, hadaad ogaatidna, waad xasuusan kartaa sida qaabka Nano ee qiimaha u shaqeeyay, Chirp waa isku mid. "
Chirp loogu talagalay Twitterfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Chirp oo loogu talagalay Apple Watch, oo ah barnaamij ku soo celiya Twitter-ka Apple's smartwatch
Beta-kii labaad ee iOS 12, watchOS 12, tvOS 12 iyo macOS Mojave ayaa hada loo heli karaa horumariyeyaasha
HBO waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto ciyaarta rasmiga ah ee Westworld ee loogu talagalay macruufka